Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka Eswatini » Muxuu Hadalka Ku-simaha Ra'iisul Wasaaraha Eswatini iska indhatiray
Muxuu Hadalka Ku-simaha Ra'iisul Wasaaraha Eswatini iska indhatiray
Deganaansho ayaa lagu soo celiyey Boqortooyadii Afrika ee Eswatini. Deganaantan waxaa la kulmay iska caabin. Shaqo badan ayay qaadan doontaa in muwaadiniinta kooxaha iyo dowladda lagu soo qaado isla bogga, laakiin xoogaa horumar ah ayaa la sameeyay.
Ku-simaha Ra'iisul Wasaaraha Boqortooyada Eswatini wuxuu la hadlay muwaadiniinta isagoo ka jawaabaya shirkii SADC Troika ee dhacay 4-tii Luulyo
Liistada rabitaanka muwaadiniinta ayaan wali lagu soo hadal qaadin bayaanka Raiiselwasaaraha laakiin waa furitaan bilow ah oo ah wadahadalo si deg deg ah loogu baahanyahay oo udhaxeeya kooxaha muwaadiniinta iyo Dowlada Eswatini
Raiisel wasaaraha ayaa ka digay halista kale ee ku soo korortay Eswatini: COVID-19
Bulshada Horumarinta Koofurta Afrika waxay aadeen Boqortooyada Eswatini si ay isugu keenaan Dowladda iyo kooxaha muwaadiniinta gaarka loo leeyahay si loo oggolaado dood ilbaxnimo ah oo lagu xallinayo khilaafaadka iyo xasilloonida dalka.
Iyadoo abaabulkii xasilloonida millatariga dib loo soo celiyey, shaqaalaha dawladdana ay shaqada dib ugu laaban doonaan laga bilaabo Talaadada. Ku simaha R / wasaaraha khudbad uu u jeedinayo dadka wuxuu ku dhiiri gelinayaa qof walba inuu ku laabto shaqadiisa isla markaana uu ka feejignaado halista sii fideysa ee COVID-19.
The Dowlada Eswatini ayaa usheegtay SADC tqoryaha koofiyadaha koofiyadda laga keeno ee Koonfur Afrika ayaa loo adeegsanayaa in lagu dilo muwaadiniinteeda. Qoryahaas, ayaa dowladda la sheegay inay tiri, wuxuu ka yimid EFF ee Koonfur Afrika & waxaa la siiyay ururkeeda walaasheed, EFF ee Swaziland.
Halgamayaasha Xorriyadda Dhaqaalaha (EEF) waa garabka bidix ee Koonfur Afrika ee xisbi siyaasadeed bidix-bidix-Afrikaan ah. Waxaa aasaasay Madaxweynihii hore ee Ururka Dhalinyarada Afrika ee Julius Malema, iyo xulafadiisii, 2013.
Sida laga soo xigtay laba madax banaan eTurboNews ilo wareedyo, kacdoono ku labisnaa dareyska askarta Eswatini ayaa la arkayay iyagoo ka horyimid daneeyayaasha Eswatini taasoo keentay khasaaro, dhaawacyo, iyo dhimasho.
Dhaqdhaqaaqayaasha iyo muwaadiniinta ayaa sheegaya in dowladda ay joojisay gudbinta codsiyada ku baaqaya dib u habeynta dimuqraadiyadda, gaar ahaan doorashada ra'iisul wasaare uusan soo magacaabin boqorka.
Wareysi lala yeeshay Audrey Brown oo ka tirsan BBC-da Diirada saar Afrika, Sikhanyiso Dlamini, gabadha boqorka iyo wasiirka warfaafinta iyo teknolojiyada, ayaa sheegtay in gudbinta codsiyada la joojiyay sababo la xiriira mowjad seddexaad oo soo socota oo ah Covid-19 iyo in taa bedelkeeda la soo bandhigo hanaan gudbinta dalwaddii ah. “Waxaan leeyahay calooshood u shaqeystayaal shisheeye ayaa ku soo duulay boqortooyada, oo ay shaqaalaysiiyeen dadkan [kuwa ku baaqaya dib u habeyn dimuqraadiyadeed] iyagoo wata ajandayaas… dharka ciidanka booliska iyo dirayska ciidanka, kuna dhex milmay muwaadiniinta una diraya fiidiyowyo iyaga la mid ah oo ku weeraraya muwaadiniinta aan waxba galabsan Amarka toogashada si loo dilo kama uusan imaan boqorka haddii ay jiraan amar noocaas ah. ”
Dhanka kale, qoraalada baraha bulshada iyo qoraalada lagu daabacay Swaziland News waxay si weyn u muujinayaan qoraalada Eswatini muwaadiniintu waxay dalbanayaan dib-u-habeyn dimuqraadi ah.
Maalin Axad ah 4 July 2021, laba Saxafiyiinta Qaabka cusub, Magnificent Mndebele iyo Cebelihle Mbuyisa, oo loo xilsaaray eSwatini ayaa la xiray, la faraxumeeyay, oo ay jirdil u geysteen ciidamada amniga, sida lagu sheegay tweets lagu daabacay.
Saxafiyiinta Qaab-dhismeedka New Frame waxay ku sugnaa eSwatini si ay uga warbixiyaan mudaaharaadyada dimuqraadiyadda ee diiradda lagu saarayo dilka gobolka ee muwaadiniinta. Intii ay dalka joogeen, waxaa laga joojiyay jidgooyooyin dhowr jeer, loo hanjabay, laguna qasbay inay masaxaan waxyaabaha ku jira taleefannadooda iyo kamaradaha.
A liiska 20ka daneeye ee ugu muhiimsan, ururada, hay'adaha gaarka loo leeyahay ee ku yaal Eswatini, oo la xiriira wafdiga SADC ee Dowlada ayaan wali looga hadlin khudbad uu sii hayaha ra'iisul wasaaraha horaantii maanta, July 5.
Ma jiro weli wax war ah oo toos ah oo ka soo baxay Madaxa Gobolka, Boqorka Eswatini, Mswati III.
Sidan waa hadalkii ku simaha Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Boqortooyada Eswatini
Go'aankeenna wadajirka ah ee ummad ahaan waa inaanan waligood indhaha ka qarsan ujeedka xad-dhaafka ah ee kor u qaadista nolosha dhammaan emaSwati welina lama dhaqaajin karo oo lama hor istaagi karo.
In kasta oo ay jiraan dhacdooyinkii usbuucii la soo dhaafay oo ay ku suntanaayeen rabshado, gubid, iyo bililiqo baaxad leh oo aan horay loo arag, haddana waxaan u midownahay baaqeenna ku aaddan nabad iyo xasillooni waarta.
Waxaan ku faraxsanahay shalay inaan soo dhaweynay xubinta SADC Troika oo ku jirtay howlo xaqiiqo raadin ah casuumaad aan ka helnay. Hawlgalkan xaqiiqo raadinta ah ee SADC wuxuu sii socon doonaa waqtiga loogu talagalay maadaama aan wadaagno ujeedada guud ee gobolka ee ah xaqiijinta nabad waarta iyo xasilloonida gobolkeenna. Waxaan Qaranka ka codsanayaa inay is dejiso oo samirto inta hawshu socoto.
Muwaadin dalkan iyo gobolkan, waxaan dhamaanteen la wadaageynaa mas'uuliyada ah inaanan waligood ku kicin waxqabad kasta oo diidaya talaabooyinka aan ku horumarinay nolosha dadka, iyadoo aan loo eegin sida mowqifkeenu u kala duwanaan karo xilli kasta.
Khasaaraha aan la aqbali karin ee ku yimid Dowladda iyo hantida gaarka loo leeyahay ee ay geysteen bililiqeystayaashu ayaa hadda si wanaagsan u galay balaayiin Emalangeni, taasoo dib u dhac weyn ku ah kobaca iyo xasiloonida dhaqan-dhaqaale ee dalka. Qiyaasta hadda jirta waxay muujineysaa in qiimaha dhaawaca uu gaarayo ilaa E3 bilyan, iyadoo 5 000 shaqooyin lumiyeen lana tirinayo. Shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (MSMEs) sidoo kale looma tudhin bililiqeystayaashan, maadaama qiyaastii 1 000 oo meherado yaryar ay saameyn ku yeesheen.
Tani waxay ku soo beegantay xilli dalkeenna iyo adduunkuba ay ku hawlan yihiin istiraatiijiyad ballaadhan oo lagu hurinayo shaqo abuurka iyo in lagu dhaqaaleeyo dhaqaalaheenna dhabbaha koritaanka waara. 3
Rabshadaha aan horay loo arag ayaa sidoo kale si ba'an ugu dhacay waaxdeena caafimaadka maadaama, iyo kuwo kale, lix gaari oo caafimaad ah, oo ay ku jiraan ambalaasyada, la burburiyey; kuwaas oo qaarkood ahaayeen kuwo cusub.
Kuwaas waxaa ka mid ah gawaarida gaarka ah ee COVID-19 ee loogu talagalay barnaamijka raadinta xiriirka iyo qaadista shaybaarka COVID-19 ee gobolka Shiselweni. Xafiisyada Caafimaadka ee Gobolka Nhlangano ayaa la gubay. Ambalaas kale ayaa lagu weeraray gobolka Lubombo taasoo halis gelineysa nolosha bukaannada saarnaa diyaaradda. Tani way dhaaftay oo way dhaaftay 10 xarumood oo Tinkhundla ah oo ay burburiyeen bililiqadaas iyo rabshadahaas.
Xaaladdan nasiib-darrada ah waxay saameyn ku yeelatay jawaab-celintayada 'COVID-19' siyaabo badan, laakiin waxaan weli go'aan ka gaarnay oo aan damacsanayn dadaalkeenna ah inaan adeegyo caafimaad u fidinno dhammaan emaSwati. Waxaan si hagar la’aan ah uga dhex muuqan doonnaa dadaalkeenna ah inaan si hufan ugu adeegno Qaranka.
Dowladdu waxay ku faraxsan tahay inay ogaato in xaaladda dhulka ay deggan tahay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, iyadoo ciidamadeenna amniga ay si adag u xaqiijiyeen ilaalinta nabadda iyo kala dambeynta dhammaan afarta gobol ee dalka. Ciidamadeena amniga ayaa sii wadi doona feejignaanta sugida amniga shacabka, ganacsatada iyo hantida kale.
Waxaan, sidaa darteed, ku dhiirigalinaynaa dhammaan emaSwati inay sii waddo wadista dhaqaalaheena annagoo ku laabaneyna shaqada oo aan fureyno dhammaan ganacsiyada aan saameyn ku yeelan. Tani waa, si kastaba ha noqotee, in lagu sameeyo si buuxda iyadoo la raacayo xeerarka COVID-19. Bandowga ayaa sii socon doona laga bilaabo 6-da maqribnimo ilaa 5-ta subaxnimo waana in xafiisyada ay sii xirnaadaan 3:30 galabnimo si shaqaalaha loogu ogolaado inay si nabad ah ku yimaadaan guriga waqtiga bandowgu socdo.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo emSwati inaan wali la kulanno xaalad cabsi leh, oo ah tan COVID-19, oo si xawli ah u socotey maalmihii la soo dhaafay. Waxaan sii wadaynaa inaan la kulanno kororka tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ee dalka 96 kiisaska u dhexeeya 13-19 Juun, 207 kiisaska inta lagu jiro usbuuca 20-26 Juun, iyo 242 inta lagu jiro usbuuca 27 Juun ilaa 3da Luulyo 2021. 5
Jahawareerka guud ee kiisaska cusub wuxuu muujinayaa isbedel kore oo sii socda iyadoo tijaabada waxtarka ay ka korortay 3% ilaa 9% sidii shalay. Saddex dhimasho oo la xiriirta COVID-19 ayaa la soo sheegay intii lagu jiray usbuucii la soo dhaafay ka dib markii ay soo sheegeen hal kiis usbuucii ka horreeyay.
In kasta oo heerka deggenayaasha sariirta ee xarumaha go'doominteennu ay weli ku sugan tahay 9% hoose, kororka tirooyinka ayaa daliil cad u ah in waddanku ku jiro marxaladihii ugu horreeyay ee mowjaddii saddexaad. Saadaashu waxay muujineysaa inay sii jiri doonaan kororka kiisaska cusub 4 ilaa 6 toddobaad ee soo socda ka hor intaan heer sare la gaarin. Waxaan ka warqabnaa in kororka kiisaska cusub ay horseedayso kororka tirada dhimashada muddo labo toddobaad gudahood ah.
Mar labaad, waxaan ka codsanayaa dhammaan emaSwati inay feejignaadaan oo ay si buuxda ugu hoggaansamaan Xeerarka COVID-19 iyo hab-maamuuska caafimaadka. Dhanka kale, Dowladdu waxay sii wadaa inay soosaarto tallaal dheeri ah oo ah COVID-19 oo loogu talagalay emaSwati si loo xoojiyo jimicsigeena tallaalka.
Toddobaadkii dhammaadkiisii, waxaan helnay 12 000 oo dheeri ah oo ah tallaalka Oxford-AstraZeneca. Qiyaasahaani 6
waxay awood noo siineysaa inaan sii wadno inaan siinno qiyaas labaad shaqaalaheena caafimaadka markaan u gudbeyno heerarka xiga ee jimicsiga tallaalka. Wasaaradda Caafimaadka ayaa bixin doonta cusbooneysiinta tallaalka.
Marka aan helno macluumaad dheeri ah oo ku saabsan faafitaanka noocyada Delta ee Fayraska COVID-19 ee dalalka deriska ah, waxaan uga digeynaa Ummadda fursad sii kordheysa oo ah in virus-kan uu ku faafo dalka sababo la xiriira isu-socodka dadka ee dal ilaa dal kale. ? Sidaas awgeed, waxaan ka codsaneynaa Ummadda inay sii wado u hoggaansanaanta Shuruucda COVID-19 ee ay Dowladdu dejisay si ay u yareyso saameynta aafadu ku yeelatay dadka.
1. Xidho wejigaaga oo daboolo sankaaga iyo afkaaga;
2. Dhaq gacmahaaga ama fayodhowrka si joogto ah;
3. Ka fogow dadka badan iyo meelaha kooban ee hawo yar leh ama wareegga hawada;
Aynu iska ilaalino COVID-19 isla markaana ilaalino shaqaalaheena daryeelka caafimaadka.
Maarso Nabadeed 10-kii Luulyo 12.00PM
Qaramada Midoobay ee New York #JariskaforThabani #SwatiniProtests #TiniTwitter #eswatini #swaziland #FreeSwaziland #Democracynow #Kungahlwakwenile #xikmad #DimuqraadiyadaSwaziland #soo dayswatini #SwaziLivesMatter pic.twitter.com/XTxWe5v51z
- #SowziLivesMatter (@ nacaybtire1) July 5, 2021
In kasta oo dib-u-dhac weyn ku yimid nidaamkeenna caafimaad ee bililiqo dhowaan dhacday, ma joojin doonno caawinta emaSwati inay ku guuleysato dagaalkan ka dhanka ah aafada Waxaan sameyn doonaa wax walba oo awoodeena ah si aan ula xiriirno dadka.
Dib u furida xarumaha adeega gudaha
Qoraal kale, waxaan jeclaan lahayn inaan u xaqiijino Qaranka in dhammaan Xarumaha Adeegyada Gudaha ee waddanka oo dhan ay shaqeyn doonaan laga bilaabo berrito, marka laga reebo Manzini, Hluthi, Hlatsi, iyo Siphofaneni.
Diiwaangelinta shirkadda iyo cusboonaysiinta liisamada baabuurta
Dawladdu waxay kaloo ka warqabtaa in la carqaladeeyay cusboonaysiinta liisamada diiwaangelinta baabuurta iyo diiwaangelinta shirkadaha intii lagu jiray rabshadihii dhowaa. Sidaa darteed waxaan ogeysiineynaa Qaranka in dib loo cusbooneysiiyay liisamada gawaarida ilaa 20 July 2021. Cusboonaysiinta diiwaangelinta shirkadaha ayaa la kordhiyay ilaa 31 Ogosto 2021.
Dawladdu waxay jeceshahay inay u xaqiijiso dhammaan emaSwati, bulshada caalamka, la-hawlgalayaasha diblomaasiyadeed, iyo dadka deggan Eswatini in aan sameyn doonno wax kasta oo lagama maarmaan u ah si loo hubiyo amniga bulshada maadaama noloshu caadi ku soo noqoneyso.
Miyaan ka niyad jabiyaa dadweynaha iibsashada argagaxa oo waxaan siiyaa hubaasha ah inaan sameyneyno dhaqdhaqaaq kasta si aan u hubino inay jiraan alaab ku filan dukaamadeena markasta.
Waxaan sii wadeynaa inaan ku tiirsanaano dhamaan emaSwati si aan u sameeyno wax sax ah oo aan si adag uga ilaalino cunsuriyada shisheeye ee loola jeedo in lagu carqaladeeyo wadankeena isla markaana loo hanjabo wada noolaanshaheena.
Waxaan leenahay hal waddan oo innaga oo dhan ayaa looga fadhiyaa in aan ilaalino oo aan ilaashanno wixii lagu yiqiinnay qarniyo badan - waana nabaddeenna iyo xasilloonideena.
Ku simaha R / wasaaraha